Vanodiwa vadzidzi shamwari nevabereki; Sezvaunoziva, yeTurkey yakakura saiti yekudzidzira yeGerman iyo ine mazana eGerman kosi yedu webhusaiti. Pamusoro pezvikumbiro zvako, isu takakamura izvi zvidzidzo zvevadzidzi vepuraimari nesekondari uye tikazvikamura kuva makirasi. Isu takakamura zvidzidzo zvedu zveGerman zvakagadzirirwa zvinoenderana nedzidzo yenyika dzidzo yakashandiswa munyika medu yevadzidzi vepuraimari nesekondari uye takazvinyora pazasi.
Zvidzidzo zveGerman zvakanyorwa pazasi zvinowanzove zvekutanga uye zvinoonekwa zvidzidzo zveGerman. Sezvo edu akadzama uye akareba akadzidziswa echiGerman zvidzidzo zvisina kukodzera zvakanyanya kune vepuraimari uye sekondari vadzidzi vechikoro, isu takangosanganisa edu akareruka uye anoonekwa ezvidzidzo pano.
Pazasi pane runyorwa rwezvidzidzo zveGerman zvinopihwa kuvana vekutanga uye kusekondari vadzidzi munyika yedu yese Iyo yeGerman unit runyorwa pazasi iri muhurongwa kubva pazviri nyore kusvika zvakaoma. Nekudaro, mune mamwe mabhuku echiGerman, marongero ezvidzidzo anogona kunge akasiyana mune zvimwe zvikoro.
misoro inoratidzwa kazhinji muzvikoro zvepuraimari nesekondari muTurkey zvinotevera
Miyezi yeGermany neMwaka
Mifananidzo yeGerman Numeri
Mifananidzo yeGerman Clocks
Mifananidzo yeGerman Organs
Vadiwa vadzidzi nevabereki, vepuraimari uye vesekondari vadzidzi vechikoro, mifananidzo yezvidzidzo zveGerman pawebhusaiti yedu zvakanyorwa pamusoro, uye misoro mitsva inowedzerwa kune yedu saiti nguva nenguva. Iri peji richavandudzwa panowedzerwa zvidzidzo zvitsva zveGerman.
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa anenge makore maviri apfuura, musi wa1 Mbudzi 01, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa2020 Zvita 20.
Tags: 6. kirasi zvidzidzo zvese, 7. kirasi zvidzidzo zvese, 7th giredhi zvidzidzo zveGerman, 8. kirasi zvidzidzo zvese, 8th giredhi zvidzidzo zveGerman, german yevana, chiGerman zvidzidzo zvevana, Zvidzidzo zveGerman zvezvikoro zvepuraimari, epakati chikoro german zvidzidzo